Jawaari oo Beydhabo u aaday in uu Ethiopia uga tuugo sii joogitaanka Soomaaliya. |
Jawaari oo Beydhabo u aaday in uu Ethiopia uga tuugo sii joogitaanka Soomaaliya.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa lacadeeyay in uu u duulayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay si saraakiisha hogaamisa ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya ku sugan uu uga dhaadhiciyo in ay Soomaaliya kusii nagaadaan.
Xuseen Carab Ciise oo ah xildhibaan Soomaaliyeed gudoomiyana ka ah gudiga amaanka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu xaqiijiyay in gudoomiyuhu uu dhawaan tegi doono Baydhabo si uu kulamo ula qaato hogaanka Meleteriga Ethiopia ee Soomaaliya ka tirsan.
Kulankaasi ayaa waxaa lasheegy in muhiimada ugu weyn ay tahay qaabkii Ethiopia looga codsan lahaa in ay ciidamadeedu ay Soomaaliya ugu sii sugnaan lahaayeen inta looga diyaar garoobayo qaabkii ciidamo kale booskooda loogu buuxin lahaa.
Bixitaanka ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya u joogay in ay caawiyaan dowlada Soomaaliya ayaa noqotay jawha wareer cusub oo dowlada Soomaaliya soo wajahaya maadaama ay hor taagnaayeen cudud muuqata oo Shabaabku leeyihiin ay xilligaan kusoo fakaneyso dowlada Soomaaliya ee aan laheyn ciidan ka difaaca cadawga gudaha iyo dalka.